Xiisan xoogan oo wali ka taagan Magaalo Xeebeedka Boosaaso ee Puntland. – Hornafrik Media Network
Xiisan xoogan oo wali ka taagan Magaalo Xeebeedka Boosaaso ee Puntland.
Xiisad ka dhalatay Canshuuro Xad dhaaf ah oo lagu soo rogay iyo Lacagta Shilin Soomaaliga ah ayaa ka taagan Magaaladda Boosaaso ee Xarunta Ganacsiga Puntland. kadib markii ay Ganacsatadda Magaaladaasi Albaabadda isugu dhufteen Goobahoodii Ganacsi.
Ganacsatada ayaa ka gadooday Canshuur aan xad leheyn oo maamulka ‘Puntland’ kusoo rogay dhammaan goobaha ganacsiga taasi oo keentay in ganacsatadu ay albaabada isugu laabaan goobaha ganacsiga. Waxaa sidoo kale Xiisadda qayb ka ah Lacagta Shilin Soomaaliga ah oo Muddooyinkan laga diiday Goboladda Dhexe ee Somalia.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in maamulka ‘Puntland’ uu dukaan walbo dul dhigay lacag 20% ah oo ka baxsan tariifada badeecadaha dekadda ah, iyo sidoo kale canshuurta maalinlaha ah iyo midda billaha ah, taasoo ay ka gadoodeen Ganacsatadda Boosaaso.
Boosaaso waa magaalada ugu weyn ee dhacda gobollada waqooyi Bari Soomaaliya. Waana Xarunta Ganacsiga ee Puntland iyo Goboladda Dhexe ee Somalia.
Madaxwaynihii Hore ee Galmudug, Guuleed oo difaacay Sh Nuur Baaruud, xilli ay Xildhibaano ku eedeeyeen inuu sameeyay Kicin Bulsho ka dhan ah Baarlamaanka.